Izinto ezili-11 eziTitshala eziManyeneyo zinokwenza ukuba zibuzwe kwakhona
Ootitshala Iingcebiso kunye namaqhinga
Ukwakha Ubume obuhle njengeNkunzi
Esinye sezihluthulelo zokuphumelela kwabafundisi abathatha indawo kukuba bakhe idumela elihle kwisikolo. Ootitshala abathanda indawo ethile baya kubacela ngegama. Amacandelo anegama elifanelekileyo libizwa ngokuba ngowokuqala kwizabelo ezikhethwa njengezikhundla ezide zithuba. Ngako oko, abatitshala ababambelayo kufuneka bathathe amanyathelo asebenzayo ekwakheni olu hlobo lolwazi. Oku kulandelelanayo izenzo ezilishumi elinanye ezithatha indawo ootitshala abathatha inokuthi bathathe ngokuphindaphindiweyo ukuze babuyiselwe kwakhona kwakhona.
Phendula ifowuni yakho ngokufanelekileyo
Iifoto ze-Blend - I-Hill Street Studios / I-Brand X Izithombe / Getty Izithombe
Uza kuthiwa kusasa ekuseni, rhoqo ngo-5: 00 ekuseni. Qiniseka ukuba uphakamisile kwaye ulungele. Smile phambi kokuba uphendule ifowuni kwaye uthethe ngokufanelekileyo. Kubalulekile ukuphendula ifowuni nokuba ngaba awuyi kukwazi ukufaka endaweni yaloo mini. Konke oku kwenza umsebenzi womgcini-nxaxheba ube lula.
Yiba nomusa kuMququzeleli oMasizi
Umququzeleli wesithuba unomsebenzi onzima kwiindlela ezininzi. Bavuka kusasa ukuba bafumane iifowuni ezivela kootitshala abangayi kuba khona. Ootitshala abangaqulunqwayo bangabanika imiyalelo ukuba babuyiselwe kumfundisi othatha indawo. Emva koko kufuneka zilungiselele abafaka indawo ukuba bafunde iiklasi zabo. Nangona kunikezelwa ukuba kufuneka ube nomusa kuwo wonke umntu esikolweni, kufuneka uphume ngendlela yakho ukuze ujabule kwaye ujongane nomququzeleli wesithuba.
Yazi iMigaqo yeSikolo
Kubalulekile ukwazi imigaqo ethile nemigaqo ethile yesikolo. Kufuneka uqinisekise ukuba uyazi naziphi na iinkqubo ezifuneka ukuba zilandelwe ngethuba loxinzelelo. Unokuba ufundisa ngexesha lenkwenkwezi okanye umlilo , ke qiniseka ukuba uyazi apho kufuneka uhambe nento okufuneka uyenze. Kwakhona, isikolo ngasinye siya kuba nemithetho yaso kwizinto ezinjengeentlanzi kunye nokudlula iholo. Thatha ixesha lokufunda le nkqubo ngaphambi kokuba uqale isabelo sakho sokuqala kwisikolo ngasinye.
Ingubo yobugcisa iyimfuneko, kungekhona nje ukuba wenze impembelelo enhle kubasebenzi kodwa kwakhona ukuba abafundi bakho bazi ukuba uqinisekile kwaye ulawula. Hamba nenkolelo yokuba kuhlale kukulungele ukuba abantu bazibuze ukuba kutheni unxibe kakhulu kunokuba uzibuze ukuba kutheni ukhululekile.
Qalisa ukuya esikolweni
Bonisa ekuqaleni. Oku kuya kukunika ithuba lokufumana igumbi lakho, uzifundele ngesicwangciso sesifundo, kwaye ujongane nayo nayiphi na imiba enokuvela. Ukuba akukho sicwangciso sesifundo sikhona, oku kuya kukunika ithuba lokuza nesifundo sakho somhla. Ekugqibeleni, unemizuzu embalwa ukuqokelela ngaphambi kokuba usuku luqale. Qaphela ukuba ngokukhawuleza kuya kushiya isibi kakhulu esikolweni.
Xa ufika esikolweni, usenokujamelana neemeko ezahlukeneyo kunokuba kuchazwe kwifowuni. Olunye utitshala engabikhoyo mhlawumbi ungabangela ukuba umququzeleli womncedisi atshintshe isabelo sakho sosuku. Ukongeza, unokucelwa ukuba ube khona kwintlanganiso yokubamba, uthatha inxaxheba kwimfesholo yomlilo, okanye uthathe umsebenzi wothisha njengabaphathi abasesikolweni. Isimo sengqondo sakho sokuguquguquka asiyi kubona kuphela kodwa siya kunceda ukugcina ubunzima bakho bunzima.
Gwema indawo yomsebenzi wothisha kunye nezinye iindawo apho ootitshala behlanganiselwa khona ukuhleba. Ukuvakalelwa kwantyazana onokuyifumana ngokuba 'yinxalenye yeqela' akuyi kuba nefuthe kwimiphumo ekhoyo malunga nesigama sakho esikolweni. Kubaluleke kakhulu ukuba ungathethi kakubi ngotitshala onommiselo. Awunakuqiniseka ukuba amagama akho akayi kubuya kubo.
Ukuba Ukhohlo oluKhiye, iiSabelo seBanga
Ootitshala abayikulindela ukuba ubhade izabelo kubo. Ukongezelela, ukuba abafundi bagqibile isabelo esifana nesicatshulwa okanye omnye umsebenzi onzima, akufanele ulungise oku. Nangona kunjalo, ukuba utitshala uye washiya isitshixo kwisabelo esicacileyo, thatha ixesha lokuhamba ngamaphepha kwaye ukhangele ezo ziphosakeleyo.
Bhala uMfundisi Ingqalelo ekupheleni kosuku
Ekupheleni kosuku, qiniseka ukuba ubhala inqaku elichanekileyo kumfundisi. Baya kufuna ukwazi ukuba ngabafundi basebenza kangakanani kwaye baziphatha njani. Awudingi ukubonisa imiba encinci yokuziphatha kumfundisi, kodwa kubalulekile ukuba uchaze nayiphina imingeni emikhulu ojamelene nayo kwiklasi.
Qinisekisa ukuba Tidy Up
Xa usuka kwi-messier yegumbi kunokuba ungene, utitshala kufuneka alungise ngomhla olandelayo xa bebuya. Qinisekisa ukuba ulandele emva kwakho kunye nabafundi.
Bhala Uyabonga Iileta
Ndiyabonga ileta kubantu ngabanye ngaphakathi kwesikolo abaye babenomusa kakhulu kuwe baya kuhamba ixesha elide ukuze ukhunjulwe. Nangona akudingeki ukuba ubhale inqaku lokubulela kumnxibelelisi wesithuba ngasinye xa unesabelo, ubathumelele isaziso ngesipho somqondiso njengokwakhe i-candy kanye okanye kabini ngonyaka kuya kwamkeleka kwaye kukumise isihlwele.
Iinkqubo ezinhlanu ezibalulekileyo zeKlasi
Iindlela ezili-10 ootitshala abanokukunceda ukukhusela ulwaphulo lweSikolo
KubaTitshala, ngoAgasti nguSonto loNyaka weSikolo
Ziziphi iindawo zokuLungisa iiKlasi eziSebenzayo?
Isiteji sokuBhala kweNkqubo yokuBhala
Iingcebiso Eziphezulu Kwabafundisi Babafundi
Iingcebiso zeNgqungquthela zabazali-Impumelelo
Yintoni ootitshala abayenza ngaphandle kweKlasi apho kungekho mntu ukhangeleyo
I-Alma College ye-GPA, iSAT kunye ne-ACT Data
Izithuba kunye Nemisebenzi kwiBhodi yeShiphathi sePirate
Uthini Umthetho Ngokuthandaza Esikolweni?
I-Connotation kunye neDenotation
Ukufunda uhlanga kunye nobulili nge-Symbolic Interaction Theory
IziCwangciso zokuQala eziPhambili
Uhlalutyo lwe-'Panoanoia 'nguShirley Jackson
IiNdawo eziZodwa zoqoqosho eChina
Iimpapasho zesiFrentshi ngeNgcono
UJulius Kambarage Nyerere Quotes
Izipho eziPhambili zeePivili eziphantsi kwama-R25
Ngomhla wama-21 kweyoMatshi 1960 i-Sharpeville Massacre
Ulwalamano oluphambili ngokumalunga neMatrical Succession
Indlela Ixesha leKrismesi elichazwe ngayo libikezela ngezulu eliza kuNyaka omtsha
IMfazwe yaseVietnam: USS Oriskany (CV-34)
Umntu osiNgqumbo: I-Painting yeHununted
Iindlela ezingama-50 zokwenza abahlobo kwiKholeji